Tsy Te Hanompo An’Andriamanitra Intsony Aho | Diary 2015
TANTARANY Tamin’izy niofana ho pretra no nahita ny fahamarinana. Betsaka ny olona efa nampiany ho lasa tena mpanompon’Andriamanitra.
KATOLIKA hiringiriny ny fianakaviako, ary tian-dry zareo ho lasa pretra aho. Nisy taranja telo nianarako àry tamin’izaho 12 taona, ary pretra samy hafa no nampianatra an’izany. Voaray hiofana ho pretra aho tamin’ny 1990, tamin’izaho 14 taona, ary ny sekoly fiofanana tsara indrindra teto no nandray ahy.
Tena nahay aho, ka nilazan’ny olona hoe mety ho lasa eveka raha miezaka tsara. Lasa diso fanantenana anefa aho. Filozofian’olombelona mantsy no nianaranay tany fa tsy ny Baiboly. Tena ratsy fitondran-tena koa ireo pretra, ka na izaho aza notadiavin’izy ireo hanaovana firaisana. Lasa tsy te hanompo an’Andriamanitra intsony aho, noho izany.
Tamin’izay indrindra no nisy mpivady misionera nandalo tao amin’ilay sekoly, ary napetrany tamin’ilay mpanao kaonty ilay boky hoe Manontany ny Tanora—Torohevitra Mahasoa. Nindramiko ilay boky ary novakiko hatramin’ny farany. Niaiky aho hoe: ‘Intỳ mihitsy no tadiaviko.’ Niala tao amin’ilay sekoly aho, nianatra Baiboly niaraka tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah, ary nanomboka nivory. Natao batisa aho tamin’ny Jolay 1991, izany hoe valo volana tatỳ aoriana. Nanomboka nanao mpisava lalana maharitra aho, ary nanambady an’i María, anabavy mpisava lalana. Mpisava lalana manokana izahay mivady nanomboka tamin’ny 2006. Tsy hoatran’ny taloha intsony aho, fa lasa tia manompo an’Andriamanitra indray. Faly aho manampy an’ireo olona mangetaheta ny fahamarinana, mba ho lasa tena mpanompony.